Taariikhda Cayaaraha Soomaaliya iyo qodobo kale - BBC Somali
Taariikhda Cayaaraha Soomaaliya iyo qodobo kale
27 Disembar 2010
Barnaamijkan, wuxuu eegayaa heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen cayaaraha Soomaaliya, laga soo bilaabo markii kubadda cagtu ka curatay Soomaaliya iyo hadda, iyo sidoo kale warar la xiriira Cayaaraha gobolada Garowe iyo kuwa England Premiership.
Barnaamijkan ku soo qaadanayna faalooyin iyo warar la xiriira cayaarahan England Premiership-ka.
Waxaa kaloo uu barnaamijkan si faahfaahsan uga hadli doonnaa taariikhda cayaaraha kubadda cagta Soomaaliya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen, heerka ay hadda taagan yihiin iyo cayaaraha gobolada ee hadda ka socda magaalada Garowe ee caasimad goboleedka Puntland.
Maqal Nukliyer fiican oo dunida u baahan tahay miyaa jiro?
Nukliyer fiican oo dunida u baahan tahay miyaa jiro?
Maqal Haween khaadka Itoobiya iibin jiray oo Hargeysa shaqo la'an ay ku hayso
Haween khaadka Itoobiya iibin jiray oo Hargeysa shaqo la'an ay ku hayso
Maqal Saameynta abaarta ay ku yeelatay ganacsiga xoolaha ee magaalada Garissa
Saameynta abaarta ay ku yeelatay ganacsiga xoolaha ee magaalada Garissa
Maqal Ajaanibta qaar maxay ku jeclaadeen dhaqanka Soomalida?
Ajaanibta qaar maxay ku jeclaadeen dhaqanka Soomalida?
Maqal Hooyooyin ka shaqeynaaya xasilinta magaalada Galkacyo
Hooyooyin ka shaqeynaaya xasilinta magaalada Galkacyo
Maqal Doodda Jimcaha: Kenya ma geli doontaa qalalaase dhanka dastuurka ah?
Doodda Jimcaha: Kenya ma geli doontaa qalalaase dhanka dastuurka ah?